DxOMark egosiputa igwefoto ihu abuo nke Honor V30 Pro | Gam akporosis
Ọ bụghị naanị DxOMark raara onwe ya nye iji nyochaa igwefoto azụ nke smartphones ndị kachasị ewu ewu na ahịa. Ndi otu okacha amara ya na achoputa otutu oru di iche iche dika igwe ese foto nke mobiles na ihe odi nma na udiri ndi ozo.
Na mmepe nso nso a anyị kọwara ihe DxOMark kọwara nke ọma ese foto nke Samsung's Galaxy Z Flip, nke nwetara akara ngosi arụmọrụ dị oke mma, mana ọ pụtaghị dị ka nke kachasị mma. Ugbu a, onye ahọpụtara maka nyocha bụ Sọpụrụ V30 Pro, ọnụ ọgụgụ dị elu nke a nwalere na ihe mmetụta ihu abụọ ọ na-eji, nke bụ 32 MP (f / 2.0) + 8 MP (f / 2.2).
1 V30 Pro: Sọpụrụ nwere ike itinye ndị na-agba ya selfie na ya
1.1 Kedu maka gị ime ihe na ndekọ vidiyo?
V30 Pro: Sọpụrụ nwere ike itinye ndị na-agba ya selfie na ya
Sọpụrụ V30 Pro n'ihu igwefoto na DxOMark
Site na ngụkọta nke 76 na DxOMark benchmark, na nsọpụrụ V30 Pro nọ n'ọnọdụ dị na ala nke atọ nke ogo dị n'etiti tebụl, nke na-akụda mmụọ maka ngwaọrụ na klas ya na ọnụahịa ya, nke dị ihe dị ka euro 500 na nkezi. Ọnọdụ foto ahụ na-eme ka ụfọdụ nwelite, dịka akara ngosi nke V70 Pro nke 30 na-etinye ya n'etiti igwefoto na-eche ihu n'ihu kachasị dị ala ndị otu nyocha ahụ nwalere ruo ugbu a.
Ngosipụta na iche na ihu na-abụkarị ihe ziri ezi n'ọnọdụ niileMana ihu na-egosiputa ọdịiche dị ala, na oke ike nwere ike ime ka ịpịcha ihe na ihe ịma aka dị iche. Ndị nyocha DxOMark hụkwara ụfọdụ nsogbu na-ekpughe ihe mgbe ha na-agba usoro.
Foto dị n'ihu na ọnọdụ na-enwu gbaa na Honor V30 Pro | DxOMark
Ọzọkwa, n'ihu igwefoto oyiyi agbasaghị inwe ụfọdụ agba mbipụta. Saturation na-adịkarị ala ma V30 Pro na-eme ka ụda akpụkpọ ahụ bụrụ ihe na-ekwekọ n'okike. N'èzí, usoro nkwụsịtụ na-acha ọcha na-akpaghị aka nwere ike ịbụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe, na -emepụta nkedo agba, ndị otu ahụ hụkwara ihe ndozi agba agba pụtara ìhè na obere ọkụ.
The ofu na-elekwasị anya oghere, na Nchikota na a dịtụ ukwuu ihe oyiyi ihe mmetụta pụtara, pụtara na omimi nke elekwasị anya nwekwara oke. Nkọcha kachasị mma na anya dị anya nke ihe dịka 55cm, mana belata maka isiokwu ndị dị nso ma ọ bụ karịa site na igwefoto. Nke a pụtara na V30 Pro abụghị ezigbo ngwaọrụ maka ndị ọrụ na-achọ iji ihe osise selfie gbaa. Ndị isi nọ n’azụ otu selfies na-abụkarị nke anaghị elekwasị anya na ọtụtụ gbaa.
N'ebe kachasị mma, ihe V30 Pro na-echekwa textures nke ọma, ma ọmarịcha mmetụta ịchọ mma dị ike nwere ike itinye aka na ọnwụ nke nkọwa zuru oke. A na-achịkwa mkpọtụ foto nke ọma na ọkụ na-enwu gbaa, mana ọ na-apụtawanye ìhè n'ime ụlọ yana mgbe agbapụ na obere ọkụ. Ngwaọrụ ngebichi ngwaọrụ ahụ nwere ike ịba uru mgbe ị na-agbapụ n'ọchịchịrị, na-ewepụta ihu ọma na ihu na anụ ụtọ anụ ụtọ. Agbanyeghị, mgbe agwakọtara ọkụ ọkụ tungsten dị ala, a na-ahụ otu oroma oroma.
Arụ ọrụ dị ala | DxOMark
Obere ntụ na-acha odo odo na obere saturation | DxOMark
Igwefoto na-enyekwa ọnọdụ bokeh nke na-eme ka ndabere, mana nsonaazụ ya nwere ike ịbụ nke anaghị akwụsi ike n'ọnọdụ ụfọdụ, yana ngosipụta pụtara ìhè na nrụrụ aka ọcha. Ihe omimi di omimi banyere isiokwu a nwekwara ike buru ihe ojoo, DxOMark na-ekwu na akụkọ ha.
Kedu maka gị ime ihe na ndekọ vidiyo?
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịkwado V30 Pro maka foto onwe gị, ya video mode bụ ihe ijuanya na nnọọ mma. Igwe arụmọrụ dị elu abatabeghị n'etiti ndị kachasị mma na ụdị a, mana ọ na-anọ ebe ka mma na tebụl.
N'ihi 4K ndekọ, Obere vidiyo na-egosi ezigbo nkọwa mgbe isiokwu dị n'ụgbọelu elebara anya. Ngosipụta na oghere dị na ihu na-abụ nke ziri ezi, ma n'ụzọ dị iche na ọnọdụ foto, nguzo ọcha na-akwụsi ike mgbe ị na-agbapụ na ọnọdụ mpụga ma ọ bụ n'okpuru ọkụ ọkụ ime ụlọ. Usoro nkwụsi ike na-arụkwa ezigbo ọrụ nke idobe ihe na-edozi ma kwụsie ike na ìhè.
N'elu ala, a na-ahụchapụta mkpachapụ ihu na ihu ma ọ bụ na-akụ n'okirikiri n'ihe ngosi dị iche iche, na mmepụtaghachi agba dị oke njọ, yana obere saturation na anụ ahụ, ọkachasị na obere ọkụ. Ndị nyocha DxOMark hụkwara mgbanwe mgbanwe na arịa dị egwu na obere vidiyo. Ọzọkwa, oke omimi dị omimi nwere otu mmetụta dịka na ọnọdụ foto, yana isiokwu dị nso ma ọ bụ karịa karịa igwefoto na-elekwasị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igwefoto n'ihu nke Honor V30 Pro adịghị mma [Review DxOMark]